Dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in aan la qaban karin banaanbax - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in aan la qaban karin banaanbax
Wasiirka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa sheegay in maalinba maalinta ka damebeysa uu dalka kusoo kordhayo cudurka safmareenka ah ee coronavirus, kaas oo kiisas badan laga helay dalka.
Wasiirka oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in shirar dhowr ah oo dhacay iyo qiimeyn la sameeyay lagu joojiyay isku soo baxyada dadweynaha, si looga feejignaado faafitaanka cudurka COVID-19.
Waxaa uu Wasiirka sicad u sheegay in maranaba dowladda Soomaaliya aysan ogolaan doonin dibadbax ka dhici kara Magaalada Muqdisho ha ahaado mid ay dhigayaan Mucaaradka iyo ay soo qaban qaabisay dowladda Soomaaliya.
Warkan kasoo baxay Wasiirka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa kusoo aadaya xilli Midowga Musharixiinta ay ku dhawaaqeen dibadbax ka dhacaya Taalada Daljirka Daahson ee degmada Boondheere Maalinta Jimcaha ah 26/2/2021.
Previous articleDhimasho iyo Dhaawac Ka Dhashay Ciidamo Dagaalamay.
Next articleJubbaland oo faah faahisay Kulankii Axmed Madoobe & Wakiilo ka socday Beesha Caalamka